Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Okraina sy ny Vondrona Eropeanina no nanao sonia ny fifanekena Skies misokatra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Okraina
Ny fifanarahana lanitra misokatra an'ny EU-Okraina dia tsy maintsy hohamafisin'i Okraina sy ny firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana rehetra mba hahomby.
Ny fifanarahana momba ny faritra sivily iraisana dia antenaina hanokatra an'i Okraina ho amin'ny làlana mora vidy kokoa ary hampiroborobo ny fizahan-tany.
Amin'izao fotoana izao dia manana fifanarahana serivisy momba ny serivisy an'habakabaka roa tonta i Ukraine.
Ny fifanarahana vaovao miaraka amin'ny EU dia mamaritra fa hofoanana ny famerana ny isan'ny sidina.
Ny Vondrona Eropeana (UE) sy Okraina dia nanao sonia ny fifanarahana eo amin'ny faritra misy ny seranam-piaramanidina iraisana izay hanangana habakabaka hiaraham-piaramanidina, hoy ny sampan'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny filoha ukrainiana.
Ny fifanarahana eo amin'ny sehatry ny fiaramanidina sivily iraisana, fantatra amin'ny anarana hoe Open Skies Treaty, dia antenaina hanokatra an'i Okraina amin'ny làlan-drivotra mora vidy kokoa ary hampiroborobo ny fizahan-tany, noho ny fampiharana ny fenitra sy ny fitsipika eropeana eo amin'ny sehatry ny fitaterana an'habakabaka.
Amin'izao fotoana izao, i Ukraine dia manana fifanarahana serivisy momba ny serivisy an'habakabaka isaky ny firenena eropeana. Nametraka fetra amin'ny isan'ny mpitatitra sy ny sidina isan-kerinandro izy ireo. Nanasarotra ny fidiran'ny mpitatitra vaovao ny sidina malaza.
Ny fifanarahana vaovao miaraka amin'ny EU mamaritra izany fa hesorina ny famerana ny isan'ny mpitatitra sy ny sidina. Ny mpitatitra fiaramanidina rehetra dia afaka manidina amin'ny lalana malaza, tsy ny monopolista ihany. Midika izany fa hanana fotoana hidirana amin'ny tsena ireo kaompaniam-pitaterana vola lafo vidy.
Ryanair, raha ny marina, dia efa nanambara “fanitarana mahery vaika” any Okraina raha vao miditra amin'ny tsenan'ny fiaramanidina misokatra tsy miankina amin'ny fanjakana ny firenena, miaraka amin'ny drafitra hanokafana sidina avy amin'ny seranam-piaramanidina Okrainiana 12 fa tsy ny 5 ankehitriny, ary koa ny fanokafana ireo serivisy anatiny.
Miaraka amin'ireo sidina vaovao, afaka manantena vaovao tsara ny mpandeha - antenaina hidina ny vidin'ny tapakila vokatry ny fitomboan'ny fifaninanana ary hampitsahatra ny ampihimamba amin'ny toerana itodiana malaza. Ary hihena ny vidiny noho ny fifanarahana manome alalana amin'ny orinasam-panamoriana fiaramanidina hitantana ny mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina.
Ankoatra ny mpandeha dia andrasana ny handray seranam-piaramanidina isam-paritra Okrainiana amin'ireo fanovana ireo. Handray fiaramanidina bebe kokoa izy ireo ary hanana onja mpandeha lehibe kokoa. Midika izany fa ny seranam-piaramanidina isam-paritra dia hanana vintana bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola sy fampandrosoana.
Fanampiny iray hafa amin'ny fifanarahana ho an'ireo mpandeha Okrainiana dia ny fampidirana ny vondrona Eraopeanina fenitra sy fenitra amin'ny fiaramanidina sivily Okrainiana.
Ny lanonana fanaovan-tsonia dia natrehan'ny filohan'i Ukraine Volodymyr Zelensky, filohan'ny filankevitra eropeana Charles Michel, ary ny filohan'ny komisiona eropeana Ursula von der Leyen.
Ny fifanarahana natao tamin'ny fihaonana an-tampon'ny faha-23 tany Ukraine-EU tany Kiev dia hanokatra ny tsenan-drivotra ao Ukraine sy ny UE ary hanamafy ny fiarovana ny rivotra, ny fifamoivoizana an-habakabaka ary ny fiarovana ny tontolo iainana, hoy ny sampan'ny asa fanaovan-gazety nataon'ny filoha.
Ny fifanarahana lanitra misokatra an'ny EU-Okraina dia tsy maintsy hohamafisin'i Okraina sy izy ireo vondrona Eraopeanina fanjakana mpikambana mba hahomby.